Etu esi gbanyụọ iPhone n’enweghị bọtịnụ ike: ndozi ngwa ngwa! - Iphone
apple face id anaghị arụ ọrụ
enweghị ike ịnweta fitbit m ka m mekọrịta
otu esi akụzi ozi na ios 10
otu esi elekọta ọkụkọ na ndagwurugwu stardew
Etu esi gbanyụọ iPhone n’enweghị bọtịnụ ike: ndozi ngwa ngwa!
Chọrọ imechi iPhone gị, mana bọtịnụ ike agbajiri. Ọbụna ma ọ bụrụ na bọtịnụ ike gị anaghị arụ ọrụ, Apple emeela ụzọ ị ga-esi gbanyụọ iPhone gị n'enweghị nsogbu. N'isiokwu a, m ga-egosi gị esi gbanyụọ iPhone na-enweghị bọtịnụ ike !
Olee Otú M Gbanyụọ My iPhone enweghị A Power Button?
E nwere ụzọ abụọ iji gbanyụọ iPhone na-enweghị ike bọtịnụ. I nwere ike ime ya na ngwa Ntọala, ma ọ bụ site na iji bọtịnụ AssistiveTouch mebere. Isiokwu a ga - ejegharị gị site na usoro abụọ ahụ site na iji ntuziaka ntụpụ aka!
Mechie iPhone gị n'iji Ntọala Ntọala
Ọ bụrụ na iPhone gị na-agba iOS 11, ị nwere ike gbanyụọ iPhone gị na ngwa Ntọala. Gaa na Ntọala -> General ma pịgharịa gaa na ala nke ihuenyo ahụ. Mgbe ahụ, pịa Mechie ma swipe akara ngosi ike site n'aka ekpe gaa n'aka nri.
Mechie iPhone gị site na iji AssistiveTouch
I nwekwara ike iji AssistiveTouch, mebere iPhone bọtịnụ, mechie iPhone gị. Ọ bụrụ na ebidobeghị ya, anyị ga-agbanye AssistiveTouch. Gaa na Ntọala -> Nweta -> Pịa -> AssistiveTouch ma gbanye mgba ọkụ na elu ihuenyo ahụ n'aka nri nke AssistiveTouch.
na -adọpụ ngwaọrụ Bluetooth ruo echi
Ugbu a AssistiveTouch dị, kpatụ bọtịnụ gosipụtara na ngosipụta iPhone gị. Mgbe ahụ enweta Ngwaọrụ ma pịa ma jide Mkpọchi ihuenyo . Swipe akara ngosi ikike site n'aka ekpe gaa n'aka nri gafee slide ka ike gbanyụọ imechi iPhone gị.
ị nwere ike idozi ihuenyo iphone mebiri emebi
Olee Otú M Tụgharịa My iPhone Back On?
Ugbu a ị gbanyụọ iPhone gị, ị nwere ike ị na-eche etu ị ga-esi gbanwee ya na enweghị ike bọtịnụ na-arụ ọrụ. Echegbula - emepụtara iPhones na-akpaghị aka mgbe ị na-ejikọ ha na isi iyi ike.
Mgbe ị dị njikere ịgbanye iPhone gị, jidere eriri Lightning ma tinye ya na kọmputa gị ma ọ bụ chaja mgbidi. N'oge na-adịghị anya, akara ngosi Apple ga-apụta na etiti ihuenyo na iPhone gị ga-agbanye azụ.
Mee ka bọtịnụ ike gị rụzie
Ọ gwụla ma ị nwere obi ụtọ ịnagide AssistiveTouch ruo mgbe ebighi ebi, eleghị anya ị ga-achọ ịmezi bọtịnụ ike iPhone gị. Debe oge atọrọ iji mee ka ọ dị na Storelọ Ahịa Apple mpaghara gị ma ọ bụrụ na AppleCare + kpuchiri iPhone gị.
Ọ bụrụ na AppleCare + ekpuchighị iPhone gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ idozi iPhone gị ozugbo enwere ike, anyị na-akwado Puls, ụlọ ọrụ nrụzi na-achọ. Pulse na-ezigara gị onye ọrụ akaebe ziri ezi ozugbo, ma ị nọ n'ọrụ, ụlọ, ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ localụ mpaghara. Puls mmezi abịa na a ndụ akwụkwọ ikike na ndị mgbe ụfọdụ dị ọnụ ala karịa ego ị na-e hotara na Apple Store!
Enweghị bọtịnụ ike, nsogbu adịghị!
Ekele, ị mechiela iPhone gị nke ọma! Ana m agba gị ume ịkekọrịta nke a na mgbasa ozi mgbasa ozi iji kụziere ezinụlọ gị na ndị enyi gị otu esi gbanyụọ iPhone na-enweghị bọtịnụ ike.
iOS 11 Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na iPhone: Otu esi agbanye ya & Tọọ ya!
Nsogbu na batrị iPad gị? Nke a bụ ihe ị ga - eme mgbe ọ na - agba ọsọ ọsọ!
iPhone Agaghị Anọkọ na WiFi? Nke a bụ ihe kpatara & Ezigbo Mmezi!
Ekwesịrị m ịnweta AirPods Max? Ihe niile I Kwesịrị Knowmara.
Echefuru m My iPhone passcode! Nke a bụ The Real Idozi.
iPhone Nọgidesiri Na Ọnọdụ Iweghachite? Nke a bụ The Real Idozi.
Kedu ka m ga-esi kagbuo ndebanye aha na iPhone? Nke a bụ Eziokwu!
IZU amụma nke azụ n'ime BIBLE
My iPad ihuenyo bụ nwa! Nke a bụ The Real Idozi.
SIM adabaghi ​​na iPhone? Nke a bụ ihe kpatara & Ezigbo Mmezi!
Control Center-adịghị arụ ọrụ na iPhone? Nke a bụ Ndozi ahụ!
App Store Na-ekwu 'Nkwenye Achọrọ' Na iPhone? Nke a bụ ihe mere & ndozi!
Olee Otú M Gbanwee Flashlight ihie On iPhone? Zọ Dị Mfe!
“Enweghi ike ịlele maka mmelite” Na iphone? Nke a bụ The Real Idozi!
Kedu iPhone nwere Ndụ Batrị Kachasị Mma? Nke a bụ Eziokwu!